GABDHAHA K/KOLEYGA OO KU TARTAMAY KOOBKA MAALINTA HAWEENKA
Saturday July 21, 2012 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
HANAD— Garoonka kubadda koleyga 1da Luulyo (Ex-Lugino) ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay ciyaar kubadda koleyga ah oo lagu maamuusayay maalinta haweenka adduunka ee 8-da Maarso, iyadoo ay isugu soo baxeen tartankaas gabdhaha kooxaha K/Koleyga Heegan iyo Dowladda hoose.
Tartan ciyaareedkan ayaa waxaa kasoo qayb-galay xildhibaanno ka tirsan dowladda KMG ah, wasiiro, madaxda xiriirada olombikada Soomaaliyeed iyo taageerayaal.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, Xildhibaan Cali Qaloocow, wasiirka wasaaradda shaqada, isboortiga iyo dhallinyarada, Maxamed Muxudiin Amiin, wasiiru- dowlaha arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, Cabdi Cali, Guddoomiyaha Ururka Haweenka Soomaaliyeed Caasho Gees-diir, Guddoomiyaha Ururka Haweenka HANAD Marwo Dahabo Sheekh Maxamuud, Fannaanada caanka ah Seynab Maxamed Xaaji (Seynab Laba-dhagax) iyo madax kale ayaa si weyn ula dhacay qaab ciyaareedka ay labada kooxood halkaasi ku soo bandhigeen.
Gabdhaha kubadda koleyga ee kooxaha Heegan iyo Minishiibiyo ayaa iyagu waxay soo bandhigeen tartan ciyaareed xiiso geliyay dhammaan daawadayaashii ka soo qayb-galay, iyadoo gabagabadii ciyaartaasina ay ku dhammaatay 34 dhibcood oo ay guushu ku raacday gabdhaha Heegan, halka kooxdii D/hoose ay iyaguna heleen 24 dhibcood oo keliya.
Dhinaca Guddoomiyaha Ururka Haweenka Nabadda iyo dib u heshiisiinta HANAD Marwo Dahabo Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeysay GOS iyo XSKK sida ay munaasabadan ay ugula qeybqaateen haweenka Soomaaliyeed, waxayna ciyaartoyda gabdhaha K/Koleyga ku dhiirigelisay inay kordhiyaan dadaalkooda dhanka isboortiga.